नेपालमा २०७२ साल बैशाख १२ गतेका दिन गोर्खा जिल्लाको बारपाकलाइ केन्द्र बनाई गएको विनासकारी महाभूकम्पले संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको मन पनि छिया छिया भयो । भूकम्प पीडितहरुको लागी सबैतिरबाट भौतिक तथा आर्थिक सरसहयोगका लागी आआफ्नो हिसाबले सहयोगी हातहरु सक्रिय भएका थिए । यस्तै सहयोग गर्ने क्रममा बेलायतको रेडिंगबासी नेपालीहरु खासगरी महिला तथा बिद्यार्थीहरुको सक्रियतामा आर्थिक सहयोग संकलन गरिएको थियो । रेडिंग निवासी समाजसेबी प्रतिमा केसीको संयोजनमा गोर्खा जिल्लाको बिकट गाउँ तत्कालीन आरुआर्बांग गाबिसको आर्बांगमा रहेको स्थानिका निम्न माध्यमिक विद्यालयको कम्तिमा एक वा दुइ कोठाको पुनर्निर्माणको लागी आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने अभियान संचालन गरियो । सोहि क्षेत्रमा गएर ग्रामिण बिकासमा केही समय सहयोग समेत गरिसकेकी केसीको सो अभियानबाट १,७८४.९८ पाउण्ड ( रु. २,७५,३३५) संकलन भयो । रकम संकलनको लागी रेडिंगमा रहेका बिद्यालय जाने साना बालबच्चादेखि सबैले सहयोग गरेका थिए ।
तत्कालको लागी कोठाहरुको आबश्यकता पुरा भएकोले बेलायतबासी नेपालीहरुबाट प्राप्त भएको सो सानो सहयोग रकमबाट बहुउदेश्यीय टहरा बनाउने निर्णय भयो । सो टहरा हालको लागी बालबच्चाहरुको खेल तथा शारीरिक बिकासको लागी प्रयोग गरिने छ भने भविष्यमा कक्षा थप गर्ने क्रममा त्यसबाट दुइ कोठाहरु निर्माण गरिने छ । टहरा निर्माणको लागी जनश्रमदान बाहेक कुल रु. २,९३,००० खर्च भएको तर संकलित रकम रु. २,७५,३३५ मात्र भएकोले नपुग रकम रु. १७,६६५ समेत प्रतिमा केसीले बिद्यालय निर्माणको लागी थप आर्थिक सहयोग गरेकी थिइन ।
Page visited 22304 times